च्याँखुरीलाई रेगिस्तानीको चिठी | चर्चित ढुंगेल
हास्यव्यङ्ग्य चर्चित ढुंगेल February 13, 2011, 7:28 am
माया र सम्झना !
यो रेगिस्तानमा म र मस“गै झण्डै चार लाख नेपाली आरामै छौ“ । आशा छ, त्यहा“ पनि तिमीलगायत सम्पूर्ण नेपाली आरामै छौ होला । श्री रेमिट्न्सज्युको खेती गर्ने किसानहरुका कृपाले सवैको कल्याण होस् भनी कामना गर्दछु ।
तिमीले रेडियोमा सुनेका र पत्रपत्रिकामा पढेका घटना झुठा हुन् । तिम्रो भ्रुण नै नबसेको बच्चा र मेरी स्वर्गवासी आमाको कसम π झुठो लेखेको भए दुवैको सत्यनास होस् । यो रेगिस्तानमा कोही पनि मर्दैन ।
पानीमा डुबेर, सडकमा कुदेर, दुई गाडी जुधेर, सुतेको सुत्यै भएर, विजुली लागेर, जमिनबाट माथि हेर्दा टोपी खस्ने टावरबाट खसेर, शारिरिक र मानसिक पीडा सहन नसकी आत्महत्या गरेर (बिषेशगरि छोरी मान्छेले, एकाध छोरा मान्छेले), ठूला र गरु¨ा सामानले थिचिएर आदि कारणले बाहेक कोही नेपाली मरेकै छैनन् । विश्वास गर ।
हामीलाई त मोज छ मोज । कतिसम्म मोज छ भने आजका मितिसम्म हामी कसैका शरिरबाट रगतको त के कुरा, पसिनासम्म झरेको छैन । यो बेग्लै कुरा हो लाटी π कि रगत र पसिनाले लगाएका लुगा निथु्रक्क भिजेर शशिरमै सुक्छन् ।
यहा“ त पैसा बोटमा फल्छ । पैसाको बोटमा टुप्पाटुप्पाबाट तेल झरिरहन्छ र बोट हा“गा खुर्केर गाडिएको हरियो बा“स जस्तो भएकाले टिप्न कति सजिलो छ भने सिस्नु टिपे जŒिाकै । अझ यसरी भन्छु– यहा“ पैसा टिप्न तिमीले सासुका जुम्रा टिपे जति सजिलो छ ।
रेगिस्तान देखेकी छौ ? परार साल कोशीले बगाएको लौकी र पश्चिमकुशाहामा देखिने वालुवाको मैदान जस्तै आ“खाले नभ्याइन्जेलको हुन्छ । यहा“ त्यस्तो रेगिस्तानमा धरोधर्म हामीले टेक्नु पनि पर्दैन । हामीले यो रेगिस्तानमा भेडा, बाख्रा, ऊ“ट, खच्चड आदि चराउनु पनि पर्दैन । तिनिहरु आ“फै चर्छन् । यहा“का उजाड स्थललाई फुलैफूलको बगै“चा पनि बनाउनु पर्दैन हामीले । खाली रोपीदिए, गोडीदिए, पानी हालीदिए पुग्छ ।
यहा“ त भेडेटार र पोखराकै जस्तो एकनासको मौसम छ । न जाडो न गर्मी । तेसो त गर्मीमा पचास÷साठी डिग्रीमाथिको तापक्रम हुनु र पैसा टिप्दा टिप्दै (काम गर्दागर्दै) बेहोस हुनु त सामान्य नै हो नि π
भर्खरै चौध जना यात्रु सहित मकवानपुरमा खसेको अग्नी एयरको जहाज जस्तै यहा“ उड्दाउड्दैका चरा खस्छन् र पनि यसलाई तिमीले गर्मी रहेछ नभन्नु । नेपालका हवाईजहाजमा बाज ठोक्किए जस्तै यहा“का चरा हावामा ठोक्किएर झरेका हुन् । धरोधर्म सातवटा घामका कारण हु“दै होइन ।
मैले ‘मोजमस्ती’ गरेर उब्रेको रकम महिना वितेसी पठाएकै छु । तिमीले पनि त्यो पैसाले मोजमस्ती गर्नु । छोराछोरी नभएकाले तिनको नाममा खर्च गर्ने कुरो भएन । कहिले मेरी सासुका नाममा त कहिले तिम्री सासुका नाममा खर्च गर्नु । अनि कहिले मेरा ससुराका नाममा त कहिले तिम्रा ससुराका नाममा खर्च गर्नु । हप्ताभरिका बजार नछुटाउनु । ‘किनु“’ लागेका लत्ताकपडा, सरसामान किनिहाल्नु । पोइले कमाएको जोइले खर्च गर्ने रिती नै हो च्या“खु π
तिमीले यहा“को पीर लिनु पर्दैन । यहा“ त मलाई मात्र हैन कसैलाई पनि पीर÷पीडा, दुःख÷कष्ट, निराशा÷उदाशी आदि शब्दको अर्थ थाहा छैन र अर्थ लाउनु पर्ने स्थिति पनि आउ“दैन ।
हेर, यहा“ बसुञ्जेल हामी कसैलाई पनि स्वास्नीस“गको न्यानोपनको जरुरत कहिलै भएन र हु“दैन पनि । बाह्रै महिना एयर कण्डिशनले चिसो र न्यानो दुवै दिन्छ । तिम्रा र अन्य लाखौ“ नेपालीका सन्तान स्नागृहमा बगेका छन् । च्या“खु π तिमीलाई पढ्दा अ८ठ्यारो लाग्ला तर यो सत्य हो ।
तिमीले बरु ढिलो हेर्न पाउ“छ्यौ होला तर हामीले त नया“नया“ नेपाली चलचित्र नेपालमा चलेको केही दिनमै हेर्न पाउ“छौ“ । कुनैकुनै चलचित्र त चल्नुअघि नै आइपुग्छन् । कसले ल्याउ“दो हो ? ककसले ति बेचेर कति कमाउ“दा हुन् ? त्यसको असली हकदारले के कति पाउ“दो हो ? थाहा छैन । यस्तै हाल छ यहा“ नेपाली गीतसंगीतको पनि । कुनै पसलमा मोवाइल बोकेको देख्यो भने अरु नै कुनै भाषा बोल्नेले भा“चिएको नेपाली भाषामा ‘नेपाली गीत हाल्ने ?’ भनेर सोध्छ । केहीले हालीमाग्छन् । १ जिबीको एउटा ‘सम्झना कार्ड’ भरेको नेपाली चार सय लिन्छन् । तिनले श्रष्टालाई कति देलान् ? तिमी नै अनुमान लगाऊ ।
त्यसो त अचेल यहा“कै साथीभाइका मोवाइलमा फोन गर्दा नेपाली गीत सुन्न पाइन्छ । तिनले कोस“ग, कहा“ र कसरी सम्झौता गरेर नेपाली गीत हालेका होलान् ? थाहा छैन । यहा“ नेपाली चलचित्र र नेपाली गीतसंगीतको स्वदेशकै जस्तो कन्तविजोक छ । त्यही भएर गीत लेख्न पनि मन मरेर आएको छ च्या“खु π
तर एउटा आशा लाग्दो कुरो के छ भने यहा“ झण्डै हजारौ“को संख्यामा नेपाली ब्यापारीहरु छन् । तर ति निजि कम्पनिमा मालिक र कामदार तिनै एकजना मात्र हुन् । तिनको कम्पनि विहिबार वेलुका र शुक्रबार दिनभरि मात्र खुल्छ । तर हप्ता दिनलाई पुग्नेगरी बिक्रि हुन्छ भन्दा तिमीलाई अनौठो लाग्ला । नलागोस् पनि कसरी ? नेपालमा आन्दोलनका बेला विसौ“ दिन बन्द हुने र मरेर दश दिन पसल खोल्दा पनि दुई दिनलाई नपुग्ने देखेकी तिमीलाई यस्तो लाग्नु स्वभाविक हो ।
तिनका छोटे कम्पनिमा देशीविदेशी निलादेखि सादा चलचित्रका सिडि, नेपाली गुट्खा, खुकुरी चुरोट, विभिन्न ब्राण्डका खैनी पाइन्छन् । त्यसो त केही ब्यापारीहरुले डाइस खेलाएर ‘स्वस्थ मनोरञ्जन’ दिएका छन् । तर यि सवै कम्पनिहरु गैरकानुनी हुन् । तिनको सम्बन्ध सिधै जेलस“ग हुन्छ ।
अन्य कुरा अरु कुनै पत्रमा लेखौ“ला । तिमीले पनि नेपालको खुटखबर लेखेर पठाउनु । आजलाई यतिमै कलमको मुख बन्द गर्दछु ।